Ciidammada kumaandooska Gor-gor oo tababbar soo dhammeeyeen
Cutubyo ka tirsan kumaandooska Soomaliya ee Gorgor oo tababbar gaar ah ku soo qaateen dalka Turkiga, ayaa dalka dib ugu soo laabtay.
Wasiirka gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya (XFS) oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga ayaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ku soo dhaweeyay cutubyadaas.
Wasiirka Gaashaandhigga Xasan Cali Maxamed ayaa xusay in XFS ay mudnaan gaar ah siisay dhismaha Ciidanka Xoogga.
Taliye ku-xigeenka ciidanka Xoogga dalka Soomaaliya Sareeyo Guuto Maxamed Cali Bariise oo goobta kula hadlay ciidamadan ayaa xusay in door weyn ay ka qaadan doonaan dadaallada dowladdu dooneyso in ay ku xasiliso dalka, wuxuuna intaasi ku daray in Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay diyaar u yihiin sidii shacabka Soomaaliyeed ay uga dulqaadi lahaayen culeeyska ay ku hayaan argagixisada al-Shabaab.
Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed Amar-dambe ayaa xusay in Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ay mudnaan gaar ah siisay dhismaha ciidanka xoogga, isagoo intaa raaciyay in tababbarrada gaarka ah ee ciidamada ay ku soo qaataan dalka dibadiisa ay qeyb ka tahay joogtaynta xuquuqda ciidamada.
Wasiirka difaaca Soomaaliya ayaa xusay inay mudan yihiin in loo mahadceliyo ciidanka, maadaama naftooda ay u hureen Difaaca Qaranimada Soomaaliya, waxaana dowladdu ay dadaal xooggan galisay dhismaha ciidanka Qaranka Soomaaliyeed.
Carruurta Shabaab sida khasabka ah ku askareeyo iyo ka hortaggooda
Waxaa dhawaan howl-gal Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay ka sameeyeen gobalka Bakool ay kusoo furteen carruur aad u da’ yar kuwaasoo ururka araxanka daran ee al-Shabaab ay si khasab ah u askareeyeen.
Saraakiisha dowladda Soomaaliyeed ee degmada Xudur waxay sheegeen in carruurtaas tiradoodu gaareyso sagaal lagu heystay deegaanka Doodaali lana qabtay xilli ay marayeen inta u dhaxeysa deegaannada Abal iyo Labaatan-jirow ee ka tirsan Gobollada Baay iyo Bakool.
Saraakiisha dowladda waxay tilmaameen in carruurtaasi inta badan si xoog ah looga qafaasho dhulalka miyiga ah ee dhammaan dalka.
Iyadoo dhawaan la xusay maalinta caalamiga ah ee ka hortagga askareynta carruurta, waxay dowladda Soomaaliyeed wacad ku martay ka hortagga askareynta carruurta.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed sareeyo guuto Odowaa Yuusuf Raagge ayaa sheegay in taliska xoogga ay ka go’antahay ka hortagga askareynta carruurta, isagoo intaa ku daray in argagixada al-Shabaab aan loogu dulqaadan doonin in carruurta ay si khasab ah ku askareeyaan, kana codsaday shacabka inay ku gacan siiyaan sidii loo soo badbaadin lahaa carruurta sida khaldan ay u adeegsadaan maleeshiyaadka al-Shabaab.
Sidoo kale, Wasiirka Difaaca ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Maxamed oo ayaa shaaciyay in dowladdu ay ka go’an tahay ka hortagga askareynta carruurta Soomaaliyeed.
Khilaaf cusub oo hoggaanka Shabaab ka dhigay labo qeybood
Sida ay sheegayaan ilo lagu kalsoon yahay, khilaaf cusub ayaa ka dhex bilowday hoggaanka sare ee ururka dilaaga ah ee al-Shabaab.
Khilaafkaan cusub, sida iluhu sheegayaan, wuxuu sababay inuu is casilo Muuse Macallin Mucaawiye oo ahaa madaxa amniyaadka al-Shabaab.
Waxaa la sheegay in Mucaawiye uu ka soo horjeeday amar dhawaan hoggaamiyaha al-Shabaab uu kaga saaray golaha fulinta Mahad Karaatey iyo Bashiir Qoorgaab.
Sida iluhu sheegayaan, waxaa amarkaas uu horaantii bishaan hoggaamiyaha Shabaab kaga saaray golaha fulinta ay sababtay in hoggaanka sare ee ururka dilaaga ah ay u kala qeybsamaan labo kooxood, koox kasoo horjeeddo amarkaas iyo kuwa raacsan.
Hoggaamiyahaan is casilay, waxaa la sheegay inuu raacsanaa kooxda amarka kasoo horjeedday ee garabka la ah Mahad Karaatey iyo Bashiir Qoorgaab.
Waa jab weyn oo soo wajahay kooxda ummadda Soomaaliyeed dhibaateyso ee al-Shabaab maaddaama ay ku heshiin la’ yihiin lacagaha baadda ah ee ay ka dhacaan shacabka Soomaaliyeed taasoo loo aaneynayo is ay tahay sababta guud ee khilaafka markii horayba sababtay.